Deredza uremu nekudya mupunga nehuku | Kudya kweNutri
La chikafu chemupunga Icho chikafu chakagadzirirwa kunyanya kune avo vese vanhu vanoda kudzikira huremu hwavanacho uye hunovanetsa zvakanyanya. Iyo iri nyore kwazvo regimen yekuita, zvinoenderana nekutora kwemupunga nehuku. Kana iwe uchizviita zvakanyatso, zvinokutendera iwe kurasikirwa maviri kilos mumazuva masere.
Kana iwe wakatsunga kuita chikafu ichi uchafanirwa kuve nehutano hutano, kunwa mvura yakawanda sezvinobvira zuva nezuva, kudya mupunga wakabikwa uye huku yakakangwa, kunatsa infusions yako nechinotapira uye kurisa chikafu chako nemunyu, grated light chizi uye hushoma huwandu hwemafuta emuorivhi. Iwe unofanirwa kudzokorora iyo menyu yakatsanangurwa pazasi mazuva ese iwe kuti iwe uronge chirongwa.
2 Nei chikafu chemupunga wehuku chiri sarudzo yakanaka?
4 Mazuva ese zviyero kuita dhayeti
5 Unogona here kushandisa mupunga wakasviba?
6 Murairi uye huku menyu
7 Kugadzira huku mupunga
Kudya kwemangwanani: 1 mukombe wetii, 1 diki skim yogati, 1 yakajeka tafura toast uye 1 citrus michero.
Kwekudya kwemasikati: mupunga nehuku uye 1 mukombe we bolus kana girini tii. Unogona kudya huwandu hwesadza nehuku yaunoda.
Snack: 1 mukombe wekofi nemukaka, 2 yakazara gorosi toast uye 2 macitrus michero.
Kudya kwemanheru: 1 mukombe wesobho yemuriwo, 1 mbiya yemupunga wehuku uye 1 mukombe wemuchena kana mutsvuku tii.
Usati waenda kunorara: 1 apple kana 1 pear.
Pazasi iwe unowana 3-mazuva menyu yemupunga uye huku chikafu.
Nei chikafu chemupunga wehuku chiri sarudzo yakanaka?
Mupunga une chikafu chehuku inzira yakanaka yekutaurisa kune akawedzera kilos. Ine chiito chekuchenesa, icho zvichaita kuti tinzwe kushomeka. Kune rimwe divi, kana tikasarudza mupunga wakasviba, tiri kutarisana nechikafu chine mavitamini pamwe nezvicherwa. Ichiri kune rimwe divi, huku kunobva protein asi yechinyakare zvakare ine mavitamini eboka B uye A.
Naizvozvo, nekubatanidza zvese mupunga nehuku tinenge tichijoinha zvese zviri zviviri makabhohaidhiretsi akadai semapuroteni, mavitamini, uye zvicherwa zvakafanira. Mubatanidzwa wakanaka wekufunga. Asi hongu, sezvazvinowanzoitika nerudzi urwu rwekudya, zvinogara zviri nani kuti usavarebese kwenguva yakareba munguva uye uchivasanganisa nemiriwo isinganzwisisike.
Kuvaka muviri: Pasina kupokana, mupunga ndechimwe chezvikafu zvekudya zvevatambi. Icho chimwe cheakanyanya kukosha kuti uwane mhasuru uye ndosaka ruzhinji rwevarimi vemuviri vachibheja pariri. Sechokwadi chikuru, ine magnesium uye ndeimwe yemaminerari akakosha kune vatambi. Kutenda nechikafu ichi, unogona zadza mhasuru glycogen zvitoro nekukurumidza.
VhoriyamuYese huku uye mupunga ndiwo musanganiswa wakanakisa wana huwandu. Kutenda kune glycemic index yemupunga, zvakakosha usati wadzidziswa. Mupunga wakabikwa unopa 3% fiber pamwe ne7% protein.
Tsanangura: Kana ichishandira kuwana vhoriyamu pamwe nemhasuru, mupunga une chikafu chehuku unogonesawo kududziro. Iyo protein Ivo zvakare zvakare hwaro hwakakura hwechikafu chakadai. Asi ichokwadi kuti muchikamu chino iwe unofanirwa kusanganisa chikafu neyakajairika dhizaini yakagadzirirwa kutsanangura.
Bland kudya: Kana tichitaura nezvekudya kwakapfava, tinozviita zvakateedzana zvezvikafu zviri nyore kugaya. Sezvo mune akawanda ezviitiko, tinovadya isu kana tiine imwe mhando yedambudziko rekugaya. Nenzira iyi, zvinokurudzirwa kutora mupunga wakabikwa nehuku, kwemazuva mashoma kana matatu, uye wozopinza zvishoma nezvishoma zvimwe zvekudya.
Mazuva ese zviyero kuita dhayeti
Ichokwadi ndechekuti huwandu hunogona kugara hwakasiyana pane chikafu chakaita seichi. Kupfuura chero chinhu nekuti chichagara chichienderana nebasa remuviri ratinaro. Kuti tigare tichidzivirira kuve nekudya mukati mekudya, tinogona kuwedzera imwe mupunga, nekuti sekuziva kwedu zviri kuguta. Kune vanhu vane magiramu makumi mana emupunga uye magiramu zana ehuku vanozove nezvakawanda kudarika zvekuwedzera pakudya kukuru. Asi sekutaura kwedu, iwe unogona kuwedzera huwandu hwemupunga zvishoma.
Ichokwadi ndechekuti zvinokurudzirwawo kwazvo. Sezvo iyo brown mupunga inotsigira kuonda uye chinhu chikuru sosi ye fiber. Asi kwete izvozvo chete, asi zvakare ine ma antioxidants, yakafuma mune zvicherwa uye inotipawo simba rinodiwa kuti tikwanise kutarisana nekudya kwemupunga nehuku seiyi.
Murairi uye huku menyu
Kudya kwemangwanani: Mupunga wakabikwa mumvura uye wakarohwa nezvibereko zviviri zvitsva
Pakati-mangwanani: yogati yechisikigo
Kwekudya kwemasikati: Brown mupunga nesaladi uye yakakangwa huku zamu
Kudya kwemanheru: Sadza remupunga nemuriwo nehuku
Kudya kwemangwanani: Tei, gorosi rakazara uye yogati
Pakati-mangwanani: Michero miviri yesitrus
Kudya: Rice nehuku uye sautéed miriwo
Kudya kwemanheru: Vegetable soup uye mupunga wehuku
Kudya kwemangwanani: Kofi yoga kana nemukaka wakaomeswa, yogati yakasikwa uye magiramu makumi matatu echingwa chegorosi
Pakati-mangwanani: Michero miviri mitsva
Kwekudya kwemasikati: Saladi nemafuta emuorivhi, mupunga wakabikwa uye mukaka wakakangwa nemazamu ehuku akachekwa
Unogona kudzokorora mazuva ano kusvika svondo rapera. Kana pakati pemaawa iwe uine nzara, zvakanakisa kusarudza muriwo kana michero. Rangarira kuti iwe unofanirwa kunwa mvura yakawanda uye iwe unogona kuzviita sekumukisa. Kana iwe uchida kunongedza madhishi ako, sarudza anonhuwirira mahebhu sekuwedzera kukuru.
Kugadzira huku mupunga
Kana iwe uchizobika shava mupunga, saka zvinokurudzirwa kuti urege zvichinyorova maminetsi mashoma pamberi. Ipapo tave kuzoibika nekuisa kapu yemupunga yemvura nhatu. Kune rimwe divi, zamu rehuku ndiyo nyama inokurudzirwa yerudzi urwu rwemaresipi uko isu tinoda kudzikira huremu. Yakakwana kuperekedza zvese zvakabikwa uye zvakakangwa mupunga, watinozowana hwakawanda hwekunaka. Tinogona kurunga nezvinonhuwira kana nemiti inonhuwira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Deredza uremu nekudya mupunga wehuku
Pindura kuna corry
Ini ndinofunga chikafu chakaringana uye kuti haunzwe nzara ...
izvi zvinoenderana nechirwere cheshuga here?
Pindura kuna Misifu-fu
Ini ndaifanira kuzviita kubva pamakore mana ekuberekwa kusvika pamakore mapfumbamwe ekuberekwa nekuda kwematambudziko ehutano. Uye yakaitwa chikwambo. Zvekudya chete zvandaigona kudya zvaive… .. mangwanani, mukaka weamondi, huku yakakangwa kana yakabikwa nesadza mangwanani, uye zvakafanana pakudya kwemanheru. Saka kwemakore mashanu. Asi ini ndanga ndatoti zvaikonzerwa nematambudziko ehutano.
Uye mapuroteni aripi? Semunhu wezvekudya zvinovaka muviri ini handifarire chikafu ichi, unogona kudzikira asi ini ndaizorasikirwa nemhasuru uye mhedzisiro yacho yaizove iri shoma muviri
Zvakanaka murume, uchifunga kuti huku ine 20g yeproteiniti pa100g yechigadzirwa uye mupunga webrown unosvika 8g pa100g, kudya katatu ne3g chete yechinhu chimwe nechimwe chinokupa 100g yeprotein pazuva. Kuverenga iwo eyogati nemukaka, tiri kuenda kune anopfuura 84g emapuroteni pazuva. Zvakawanda kupfuura zvakakwana ... Chii chinonzi nutritionist xd
Pindura ku harlequin